जाडो महिनामा धेरै चिसो लाग्छ ? यी खानेकुराहरू खानुहोस् « Lokpath
जाडो महिनामा धेरै चिसो लाग्छ ? यी खानेकुराहरू खानुहोस्
जाडो मौसममा सबैलाई अवश्य चिसो महसुस हुन्छ होला ! जाडो महिनामा आफूलाई न्यानो बनाउन मानिसहरूले विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाइरहेका हुन्छन् । कोही न्यानो, बाक्लो लुगा लगाउँछन् भने कोही तात्तातो झोल खानेकुरा बढी खाने गर्छन् ।
जाडो महिनामा नियमित रूपमा महको सेवन गर्ने हो भने यसले रुघा र खोकी लाग्न दिँदैन । त्यसैले चिसो मौसममा बिहान एक चम्चा मह अनिवार्य रूपमा खानु राम्रो मानिन्छ ।
चिसो मौसममा तिलको सेवन गर्ने हो भने यसले हाम्रो शरीरमा गर्मी पैदा गर्छ । तिलमा मोनो-स्याचुरेटेड फ्याट्टि एसिड र एन्टि ब्याक्टेरियल मिनरल्स पाइने हुनाले चिसो मौसममा तिलको सेवन गर्दा धेरै किसिमको फाइदा हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,मङ्सिर,७,मंगलवार १५:५३